गोरखामा भुइँस्याउ यानी याकुन – NewsAgro.com
गोरखा, ९ माघ \_गोरखाको खरिबोट गाविसमा भुइँस्याउ उत्पादन शुरू भएको छ । १३ जना युवाले एउटा पाखामा लगाएका ७ सयओटा बिरुवाबाट यही माघदेखि उत्पादन शुरू भएको हो । उत्पादित भुइँस्याउ विक्री गर्न थालिएको किसान चूडामणि ढकालले जानकारी दिए । ‘आधाआधि जति खनिसकियो,’ उनले भने, ‘एउटै बोटमा पाँच किलोसम्म स्याउ फल्यो ।’
सूर्यमुखी फूलको जस्तै बिरुवा हुने भुइँस्याउ माटोमुनि फल्छ । उनीहरूले २ सय रोपनी क्षेत्रफलमा भुइँस्याउको व्यावसायिक खेती गरेका छन् । ‘प्रतिकिलो रू. ३ सयका दरले घरैबाट भुइँस्याउ बेचेका छौं,’ ढकालले भने, ‘यसको स्वाद रूखमा फल्ने स्याउको जस्तै गुलियो हुन्छ ।’ उक्त स्याउ दैनिक सेवन गरेमा ग्याष्ट्रिकजस्ता रोग निर्मूल हुने उनले जानकारी दिए । उनीहरूले जग्गा भाडामा लिएर भुइँस्याउ खेती विस्तार गर्ने तयारी गरेका छन् । व्यावसायिक रूपमा खेती विस्तार गरी यसैलाई जीविकोपार्जनको बलियो आधार बनाउने तयारीमा समूह नै जुटेको उनको भनाइ छ । खरिबोट सामुदायिक अध्ययन केन्द्रका प्राविधिकको सल्लाहअनुसार भुइँस्याउको खेती गरिएको समूहका अर्का सदस्य लीलाधर कोइरालाले बताए । भुइँस्याउ समुद्री सतहबाट १ हजारदेखि २ हजार ५ सय मिटर उचाइसम्म उत्पादन हुन्छ । उनीहरूले २०६९ सालमा नुवाकोटको ककनीस्थित एक अग्र्यानिक फार्मबाट स्याउको बिरुवा ल्याई खेती शुरू गरेका थिए । ‘त्यतिबेला प्रतिबिरुवा रू. ४५ मा ल्याएका थियौं,’ कोइरालाले भने, ‘अब, हामी नै बिरुवा उत्पादन थाल्दै छौं ।’
भीरालो जमीनमा सिँचाइको राम्रो व्यवस्था मिलाउन सके उत्पादन बढ्ने किसानहरूको भनाइ छ । कम्पोष्ट मल प्रयोग गरेमा भुइँस्याउको उत्पादन अझ बढ्ने कोइरालाले बताए । भुइँस्याउको पातबाट चियापत्ती बनाउने तयारी भइरहेको पनि उनले जानकारी दिए । किसानले अहिलेसम्म ५० केजी भुइँस्याउ विक्री गरेको बताएका छन् । नुवाकोट, पर्वत, कास्कीलगायत जिल्लामा पनि यसको व्यावसायिक खेती शुरू गरिएको छ । २ फिटको दूरीमा १ फिट माटो उकेरा लगाएर रोपेमा स्याउको सेला राम्रोसँग लाग्ने कोइरालाले जानकारी दिए ।
← प्याक्टमा मुलुकभरबाट पौने ८ सय प्रस्ताव
यसरी गरौं अनार खेती →
व्यवसायीक कफी खेतीको प्रवर्द्धन आवश्यक : कोइराला